Ejiri oji: otua esi emeso osisi ndi ozo, foto nke anu, nuances nke orchids n 'ulo, nakwa otu esi kpochapu umu ogwu na okooko osisi n'ubi? - Mkpụrụ ubi - 2019
Kedu otu esi emeso aphids ọcha n'osisi ime ụlọ na ubi? Ụzọ dị irè na foto pesti
Aphid - obere ụmụ ahụhụ nwere elongated ahụ, ogwe aka dị ogologo na ogologo ụkwụ. Ọtụtụ mgbe ụlọplants na-ata ahụhụ site na ọcha aphids, ma e nwere ọtụtụ ụdị ndị ọzọ, winged na wingless.
White aphid bụ obere ahụhụ na egwu dị ize ndụ maka ime ụlọ na ubi. Onye ọ bụla na-arụ ọrụ ụlọ nwere ike inwe nsogbu yiri nke a, n'ihi na aphid na-abanye n'ụlọ ma ọ bụ nkata. Ọ dị mkpa ka ịchọta ngwa ngwa ahụ ma mee ihe n'ụzọ ziri ezi megide ya. Ka anyi kwuo banyere nke a n'isiokwu anyi.
Ebee ka osisi sitere na ihe osisi dị?
Kedu ka esi tufuo pests na okooko osisi n'ime ime?
Ọfọn, esiri ya n'ụlọ
Nchịkọta pesti na orchids
Kedu otu esi alụ ọgụ n'ubi ahụ?
Usoro mgbochi niile
Kedu ụdị ahụhụ ọ bụ na gịnị mere ọ dị ize ndụ?
Aphids bụ ndị na-acha ọcha ọcha, ma ọ bụghị ihe karịrị ọkara sentimita n'ogologo. Ọ na-eme nku na enweghị nku.
Egwu aphids nwere ike ịkwaga na osisi ndị ọzọ.. Ụmụ ahụhụ na-enweghị atụ na-amụba ọtụtụ. Ndị na-egbu nri na-amị mkpụrụ ma na-aṅụ ihe ọṅụṅụ na-enye ndụ, na-eri nri si na osisi ahụ ma na-ekepụta ọgwụ maka nje bacteria (ị nwere ike ịmatakwu ihe ndị aphids na-eri na ihe a).
Ọtụtụ mgbe, aphid na-abanye n'ime ụlọ na osisi ndị ọzọ. Ọ nwere ike ịbụ mkpọtụ nke okooko osisi ma ọ bụ zụrụ ifuru. Mgbe ụfọdụ, ahụhụ nwere ike ịgbapụ n'ime ụlọ n'oge ikuku.
Iji chọpụta aphids, a ga-enyocha epupụta na steam site n'ime, ebe nwanyị na-etinye nsen. Larvae yiri obere specks blank.
White aphid na-emetụta mkpụrụ osisi dicotyledonous, a na-enwekarị ike ịwakpo mkpo ọkụ. White aphids overwinter na pistachio osisi.
Ọnọdụ dị mma maka mmeputakwa nke pests bụ ala akọrọ na elu okpomọkụ.
Hụ otú ụmụ ahụhụ si ele foto:
Iguzogide mgbochi na osisi ime ụlọ na-eji ma ngwaahịa mmepụta ihe na ọgwụ ndi mmadu.
Nke kachasị mma maka ụmụ mmadụ na-emepụta ọgwụ sitere na ngwaahịa ndị na-emepụta ihe ndị na-adịghị mma. Fitoverm anaghị achọ iwepu osisi site na ogige ahụ.
Ọ dị mkpa igbatu 2 ml nke ọgwụ na 200 ml mmiri na ụlọ okpomọkụ. Wunye ihe ngwọta n'ime sprayer ma jiri nlezianya kụọ ifuru.
Ihe omuma a nwere ihe ojoo na pests, ma adighi etinye aka na ohia. Ọ na-eme dị ka onye na-ahụ maka ya mgbe a na-atụgharị ya n'ahụ nke ụmụ ahụhụ, na mgbe a na-ahapụ ya site na eriri afọ mgbe ọ na-eri osisi ndị a na-emeso ya.
Mgbe 10-15 awa, aphids kwụsịrị ike ịzụta nri. Iji dozie nsonaazụ ya, a na-atụ aro ka ịmegharịa usoro ahụ na 5-7 ụbọchị. Fitoverm na-arụ ọrụ n'ụzọ dị irè karị n'ime ụlọ dị ọkụ na akọrọ..
Ọ bụ onye na-ahụ maka ihe ize ndụ dị ize ndụ maka mmadụ; a ga - eyi uwe ma ọ bụrụ na ị na - eji ọgwụ.
Iji kwadebe ngwọta, jikọta 8 g nke ihe na-arụ ọrụ na liter nke mmiri mmiri. N'oge nhazi, wepụ okooko osisi n'elu mbara ihu ma ọ bụ n'okporo ámá.
Aktar nwere ike iji ya mee ihe mgbe ị na-edozi ma ọ bụ na-emegharị osisi. Ọgwụ na-abanye n'ahụ nke ụmụ ahụhụ, na-akpata nrịanrịa na ọnwụ. Mgbe izu atọ gasịrị, ị ga-edozi okooko osisi ahụ iji nweta ihe ga-esi na ya pụta.
Aktara na-eri ahụ, kwesịrị iji ọgwụ ndị ọzọ na-aṅụ ọgwụ.
Anyị na-enye ikiri vidiyo na etu esi eji ọgụ iji luso aphids:
Ngwọta dị mma, na-amalite ime ihe mgbe ị na-atụgharị. Actellic na-egbu aphids na otu ojiji..
Actellic bụ ọgwụ na-abụghị usoro nke na-eme nanị na kọntaktị na ụmụ ahụhụ ma ghara abanye n'ime anụ ahụ. Mmetụta nke pụtara na-emewanyewanye n'ọnọdụ ọnọdụ okpomọkụ na mmụba dị elu nke ikuku.
Maka spraying Actellic diluted na nkezi nke 2 ml kwa liter mmiri. Aktellik na-egbu egbu, ọ gaghị ekwe omume ịkwanye n'ihu ụmụ anụmanụ na ụmụaka. Ị ga-eyi uwe na ihe mkpuchi, a ghaghị imezi ọgwụgwọ naanị na mbara ihu ma ọ bụ n'okporo ámá ma zere ịkọrọ akpụkpọ anụ.
20 g nke ngwa nri wunye 250 ml nke mmiri sie.
Ọnwụ maka awa 24 na obụpde.
Cool ọdịnaya, nje ma gbakwunye ncha.
Soda na nnu.
Kwa liter mmiri ị chọrọ 1 tablespoon ego.
Gwakọta ihe ngwakọta ma gbanye osisi ahụ.
Na liter mmiri igbari 5 ml nke amonia, bido, tinye ncha.
Na-agba ifuru ahụ, jidere ọkara otu awa ma sachaa na mmiri iji zere ọkụ.
Osisi ash. Otu iko nke mgwa ihe wunye 5 lita mmiri, tinye 25 g ncha ma nye ihe ngwọta otu ụbọchị.
Nri osisi. Nri pawuda diluted na liter nke mmiri ma gbanye osisi ugboro abụọ n'ụbọchị.
Mụtakwuo banyere ụzọ ndị mmadụ si emeso aphids ebe a.
Aphid dị ize ndụ ma ọ bụ orchids, ọ na-agbasapụ n'elu osisi dum site na osisi ahụ ruo okooko osisi.
Ahụhụ dị mfe ịhụ na-acha ọcha patina.. Ọ dị mkpa iji chọpụta ebe ndị zoro ezo - isi nke Ome, buds, akụkụ dị n'akụkụ nke epupụta.
Ọtụtụ mgbe aphid na orchid na-apụta na ụlọ a na-eme ka mmiri gwụ. A ghaghị ịnọgide na-ekpo mmiri n'elu 60%.
Ọ dị mkpa iji na-agba akwụkwọ ma na-ejupụta na mmiri dị jụụ, na-ezere nchịkọta mmiri mmiri na ifuru, ma na-eme ka mmiri na-akụ n'oge.
A ghaghị ịsọpụrụ ndị na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa na-esite na osisi ndị ọzọ dị n'ime ụlọ, ebe aphid na-ebi ngwa ngwa.
Ụzọ kachasị mfe ị ga-esi na-alụ ọgụ bụ ịsacha ifuru na-ekpochasị ifuru na-ewepụ akụkụ ndị ahụ mebiri emebi.
Antiseptic maka osisi na ihe na-emerụ ahụ maka nje bụ ọrụ nke ngwọta ncha.
Mgbasa nke aphids na-enyere aka lụọ citrus infusion. Iji mee ya, ịchọrọ 100 g nke peel, lemon ma ọ bụ tangerines jikọtara ya na liter nke esi mmiri ma nye ya ụbọchị atọ. Maka mmetụta dị ukwuu karị, ị nwere ike itinye nsị anụ ahụ n'ala.
Aphids meghachi omume n'ụzọ dị njọ na mmanụ dị oké mkpa. Kwesịrị ekwesị maka ịgwọ orchids bụ osisi tii, peppermint na mmanụ osisi Neem. A gha-agbaze mmanụ ala nke mmiri na 500 ml mmiri ma tinye ya na sponge na osisi ahụ.
Ọ bụrụ na ụzọ ndị a anaghị arụ ọrụ, ị kwesịrị iji ọgwụ ọjọọ mee ihe. Maka orchids, Aktara, Fitoverm, Neoron, Fosfomit ma ọ bụ Aktellik dị mma.
Ikwesighi iji ihe nari abuo na-eji otu ọgwụ ahu eme ihe.
Enwere ike ịchọta nkọwa gbasara esi emeso aphids na orchids n'isiokwu anyị.
N'ogige ahụ, aphids na-emetụtakarị obere Ome na buds.. Akwụsị ma ọ bụrụ na aphids na-emetụta ya, ebe ọ bụ na ụmụ ahụhụ na-ezobe ihe dị egwu - pad nke na-adọta ndanda.
Otu ụzọ iji lụso ọgụ aphids n'ogige bụ site na machining. Maka nke a, ọ bara uru iji eriri mmiri. Site n'enyemaka nke nrụgide siri ike i nwere ike tufuo aphids na larvae, juputa ya. A ghaghị iwepụ aka naanị ya.
Ụzọ ndụ bụ ụzọ dị nchebe iji gbuo aphids. A na-ewere ndị agha kachasị mma n'etiti ụmụ ahụhụ dị ka ladybugs na anya edo edo, ị nwere ike ịzụta mmadụ ole na ole n'otu ụlọ ahịa pụrụ iche (ihe ụmụ ahụhụ ndị ọzọ na-eri aphids, gụọ ebe a, na n'isiokwu a, anyị gwara otú ụmụ nwanyị na-esi enyere ọgụ na aphids). I nwekwara ike na-adọta ụmụ nnụnụ na ubi na-eji feeders. Tits, Linnet na Sparrows maara otú e si emeso aphids.
Ezi akuku na-enye aka igbochi ọdịdị nke aphids - eyịm na galik na-amịpụ ụmụ ahụhụ, yana chamomile Dalmatian.
Anyị na-enye ikiri vidiyo na otu esi emeso aphids n'ogige:
Maka osisi osisi:
Osisi ndị na-adịghị mma bụ ndị kasị nwee ike ịwakpo nje ndị ahụ.
Ọ dị mkpa iji iwepụ akwụkwọ akọrọ na yellowed.
A ghaghị iziga okooko osisi ndị ọzọ ka ha na-ekpuchi ahụ.
Jide n'aka na ị ga-ekpochapụ ndanda ma họrọ saịtị ndị na-ebute site na ìhè dị iche.
Tupu ị kụọ n'ime ọkwa ọhụrụ, ifuru ahụ ga-edozi.
Ugboro abụọ n'izu iji nyochaa osisi niile dị n'ime ụlọ, jiri mmiri na-agba agba na-asa ha mgbe niile.
Maka okooko osisi:
Chebe ata ah u.
N'oge okpomọkụ, bibie ndị anthills. A ghaghị ime nke a, dị ka ndanda na ụzọ ọ bụla chebe aphids na ọbụna ha webata ya n'ime ogige (gụkwuo banyere symbiosis nke ụmụ ahụhụ ndị a ebe a).
N'oge opupu ihe ubi iji mee ka osisi niile dị ọcha.
Tupu budding, na-agba osisi na osisi ifuru na-emepụta ya.
Ejichala mmanụ aṅụ.
Saa osisi na sooks.
Ulo ulo na ubi ugbo choro ilebara anya mgbe nile. Ka oge na-aga ịme ihe mgbochi ma nyochaa ahụ ike na ọnọdụ nke osisi, ị nwere ike izere ọtụtụ ihe ọjọọ ndị metụtara pests. Ọ bụrụ na oge ọhụụ nke aphids na-efu na mberede, e nwere ọtụtụ ihe dị iche iche na kemikal pụtara na ọ ga-enyere aka n'ịlụ ọgụ megide nje.
Ụmụ ehi na-ejikọta ehi na ehi
Mkpụrụ osisi mara mma ma dị ụtọ "Russian Bogatyr": nkọwa nke ụdị dịgasị iche iche, ihe ndị na-emepụta ihe, na-eji tomato
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Kedu otu esi emeso aphids ọcha n'osisi ime ụlọ na ubi? Ụzọ dị irè na foto pesti